के हो साइलेज भनेको? साईलेज बनाउने तरीका सहित - DURBAR TIMES
HomeUncategorizedके हो साइलेज भनेको? साईलेज बनाउने तरीका सहित
के हो साइलेज भनेको?
फाईदाहरु के के छन्?
हरियो घाँसको पौष्टिकतालाई नष्ट नगरी लामो समय सम्म संरक्षण गर्न सकिन्छ । साथै यसबाट हिउँदमा (घाँस कम हुने समयमा) गाई भैंसीलाई घाँसको ब्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
वर्षा समयमा हे बनाउन गाह्रो हुने हुँदा हरियो घाँसलाई साईलेजको रुपमा संरक्षण गरेर राख्न सकिन्छ ।
कम ठाउँ तथा कम लगानीमा नै साईलेज बनाउन सकिन्छ ।
प्लाष्टिक थैलो साईलेज परम्परागत तरीकाले भण्डारण गर्ने भन्दा किफायत हुने र भण्डारण क्षतिलाई न्यून गर्ने गर्छ ।
सानो थैलोमा साईलेज बनाउनाले साईलेजको पौष्टिकतालाई नोक्सान नहुने गरी संरक्षण गर्छ जवकि ठूलो खाल्डोमा बनाउँदा हरेक दिन खाल्डोवाट साईलेज निकाल्दा पौष्टिकतामा नोक्सान हुने गर्दछ ।
हे बनाउन नसकिने घाँस तथा झारहरूलाई साईलेज बनाउन सकिन्छ ।
थैलोलाई चरा र मुसाहरूले क्षति पुर्‍याउन सक्ने हुँदा साईलेज नोक्सान हुन सक्ने । साईलेजको लागि उपयुक्त घाँसहरू पशुले खाने जुनसुकै घाँसबाट साइलेज बनाउन सकिन्छ तर घाँस पानीले भिजेको वा ज्यादै सुकेको हुनुहुन्न । खर घाँस, मकैको हरियो ढोड, जुनेलो, नेपियर, पारा र सुडान साईलेज बनाउन उपयुक्त घाँस नेपियर घाँसवाट उच्च स्तरको साइलेज बनाउन सकिन्छ । यस बाहेक सिमी, बोडी, भटमासको झाङ्गलाई पनि साइलेज बनाउन सकिन्छ ।
साईलेज बनाउने उपयुक्त समय:
साईलेज बनाउने तरीका:
साईलेज बनाउने थैलो कृषकसँग भएको पशु संख्या र घाँसपातको उपलब्धताका आधारमा ५ देखि ५० केजीको घाँस अटाउने थैलो छनोट गर्नु र्पछ । हरियो घाँस, नेपियर, मकैको ढोड, कोदोको हरियो नल, स्थानीय खर, टियोसेन्टे, सोरगम, वजरा, आदि घाँसहरूलाई शीत ओभाई सकेपछि काटेर छुट्टाछुट्टै वा मिसाई वढिमा एक अँगुलको वा ३ सेमी टुक्राको घाँसहरूलाई प्लाष्टिकको थैलोमा भरी सफा खुट्टाले थिचेर थैलाको हावा बाहिर निस्किने गरी खाँदी थैलाको मुखलाई राम्रोसँग वन्द गर्नुपर्छ । घाँस काटेको २४ घण्टा भित्र थैलोमा भरी सक्नुपर्छ ।
एवम् प्रकारले काटेको घाँसलाई राम्रोसँग खाँदेर सकेसम्म एक घण्टा देखि दुई घण्टा समयमा थैलो भर्ने काम पूरा गर्नु पर्दछ । यसरी वनाएको साईलेज २ महिना पछि खुवाउनको लागि तयार हुन्छ । कार्तिक देखि चैत्र महिना सम्म हरियो घाँसको अभाव हुने हुनाले दूधालु पशुहरूलाई साईलेज खुवाएर हरियो घाँसको आपूर्ति पूरा गर्न सकिन्छ । ५५० केजी शारीरिक तौल भएको गाई वा भैँसीलाई दैनिक २५ केजी साईलेज दिनुपर्छ भने भेडा, वाख्रालाई बढीमा ५ केजी सम्म साईलेज दिन सकिन्छ ।
राम्रो साईलेजमा हुनुपर्ने गुणहरू:
साईलेजको थैलोलाई चरा, मुसा, कुकुर, विरालो, पशु तथा केटाकेटीहरूवाट जोगाउनु पर्दछ । साईलेज जोगाउनको लागि कीटनाशक वा मुसा नाशक विषादीको प्रयोग गर्नु हुदैन।
Previous articleकतै बढि ह्याक हुने पासवर्ड प्रयोग गर्दै त हुनुहुन्न ? हेर्नुहोस आफ्नो पासवर्ड
Next articleविद्युत निर्यात ह्वात्तै बढ्यो!